पाथिभरा माताले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन : आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ ३ गते बिहिबार तदानुसार मे १७ तारीख « Light Nepal
पाथिभरा माताले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन : आजको राशिफल : बि.सं. २०७५ साल जेठ ३ गते बिहिबार तदानुसार मे १७ तारीख
Published On : 17 May, 2018 12:10 am
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल जेठ ३ गते बिहिबार इश्वी सन् २०१८ मे १७ तारीख अधिकज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथी चन्द्रमा बृष राशिमा सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु उच्च रक्तचाप दिवस दुरसञ्चार दिवस – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
कला कौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । वाणीमा मधुरता छाउनाले अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य सुधाराको योग रहेकोछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएका लगानि उत्तम साबित रहनेछ ।
नयाँकार्य थालनिको योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यहरु उत्तम रहनेछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय मध्यम रहनेछ ।
परीवार भन्दा टाँढा रहदा आम्दानिका श्रोतहरु दर्बिला बन्नेछन । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ ।
निराशा पुर्ण दिन ब्यतित रहेता पनि आम्दानिका प्रशस्त श्रोतहरु फेला पर्नेछन । मित्रजनहरुको साथ सहयोग प्राप्तरहने समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहला ।
शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्य सम्पादनमा सामान्य ढिलाईको योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । सभासम्मेलनमा सरीक भईनेछ ।
वाणिका कारण सामान्य वादविवादको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । पारिवारीक झमेलाले सताउन सक्नेछ । बिद्या तथा ब्यपारमा समय त्यति उत्तम छैन ।
सामान्य यात्रा पश्चात मनग्य आम्दानी प्राप्त हुनेछ । शारीरिक आलस्यताले कार्य सम्पादनमा ढिलाई हुन सक्नेछ । अरुको बिश्वासमा गरीएका कार्यमा अपजसको सामना गर्नु पर्नेछ । दाम्पत्य शुख प्राप्त रहने दिन रहेकोछ ।
नजिकका मित्रजन बाट नै तपाईको कार्य सम्पादनमा समस्या आई पर्नेछ । सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहने समय रहेको छ । अनावश्यक खर्चका कारण तात्कालिक आर्थिक अभाब रहन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब रहन सक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा साधारण समस्या देखा पर्नेछ । मान्यजनको सहयोगमा आम्दानी उत्तम रहन सक्नेछ ।
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल पुष २३ गते सोमबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल